Jabulani ngemfudumalo ukusebenzisana kweHongzhu yezokwelapha noRukang ukusayina izivumelwano ezikhiqizweni zabakhubazekile. Izinkomba ezivela kuzo zombili izinhlaka, uMnu Yang noMnu Lv baya kuwo futhi bathembisa ukuthi bazozama konke okusemandleni ukusekela izivumelwano ngokuqinile. Kusukela manje kuqhubeke, abakwaHongzhu bezokwelapha banganikeza izihlalo zabakhubazekile nabahamba nge-hemiplegic ngefektri yezobuchwepheshe kanye namanani wokuncintisana emakethe. Izihlalo ezinamasondo ikakhulukazi ezinganikeza njengoba,
Ukucatshangwa okubaluleke kakhulu lapho ukhetha isihlalo sabakhubazekile usayizi weshlalo esinamasondo. Iziza ezibalulekile zokuthwala isisindo sabasebenzisi abasebenzisa izihlalo ezinamasondo zazizungeze amashubhu amane e-ischial, azungeze i-femur, ukuphakama kweYang nasezinqeni. Ubukhulu besihlalo esinamasondo, ikakhulukazi ububanzi besihlalo, ukujula nokuphakama kwangemuva kwecala, kanye nebanga phakathi kwenyawo nokuqina kwesihlalo, konke kuthinta ukuhamba kwegazi kwezingxenye ezifanele zabagibeli, futhi kubangele ukuqubuka kwesikhumba, ngisho nezilonda zokucindezela. Ngaphezu kwalokho, ukuphepha kwesiguli, amandla okusebenza, isisindo sesihlalo esinamasondo, indawo osetshenziswa kuyo, ukubukeka nezinye izindaba kufanele kucatshangwe.
(1) Ububanzi besihlalo: ukukala ibanga phakathi kwemingcele emibili noma emine noma emibili lapho uhlala phansi. Faka i-5cm, futhi kuzoba negebe elingu-2,5cm nhlangothi zombili ngemuva kokuhlala phansi. Isihlalo sinciphile kakhulu, ngakho-ke kunzima ukusukuma wehle ngesihlalo esinamasondo. Ingxenye engenhla nezicubu zamathanga kuyacindezelwa. Uma isihlalo sibanzi kakhulu, akulula ukuhlala ngokuqinile. Akulula ukusebenzisa isihlalo esinamasondo. Imilenze kulula ukukhathala. Kunzima futhi ukuphuma nesango. (2) ubude besihlalo: linganisa ibanga eliqondile phakathi kweqhuzu langemuva nomsipha we-crus gastrocnemius lapho uhlala phansi, bese unciphise umphumela wokulinganisa ngo-6.5cm. Uma isihlalo sifushane kakhulu, isisindo somzimba sizowela ikakhulukazi ku-ischium, okulula ukudala ingcindezi ngokweqile endaweni yendawo; uma isihlalo sikude kakhulu, sizocindezela ingxenye yokuhlukanisa, sithinte ukuhamba kwegazi lendawo, futhi sivuse kalula isikhumba endaweni yendawo. Ezigulini ezinesinqe esifushane noma esinqunyelwe i-knee flexion contracture, kungcono ukusebenzisa isihlalo esifushane. (3) Ukuphakama kwesihlalo: ukukala ibanga ukusuka esithendeni (noma isithende) kuya esidlekeni lapho uhlala phansi, engeza u-4cm, bese ubeka unyawo lonyawo okungenani ama-5cm ukusuka emhlabathini. Uma isihlalo siphezulu kakhulu, isihlalo esinamasondo asikwazi ukungena etafuleni; uma isihlalo siphansi kakhulu, isisindo sethambo lokuhlala sikhulu kakhulu. (4) Ukuphakama kwengalo: lapho uhleli, ingalo engenhla ibheke phezulu, kanti ingalo ibekwe engalweni. Kala ukuphakama kusuka endaweni yesihlalo kuya emaphethelweni aphansi engalo, no-25cm. Ukuphakama okuqondile kwengalo kusiza ukugcina ukuma okulungile komzimba nokulinganisela, futhi kwenza izitho ezingaphezulu ezibekwe endaweni ekhululekile. I-handrail iphakeme kakhulu, futhi ingalo ephezulu iyaphoqeka ukuyiphakamisa, ethambekele ekukhathaleni. Uma i-armrest iphansi kakhulu, udinga ukuncika phambili ukuze ulondoloze ibhalansi. Akulula ukukhathala, kepha futhi kungathinta ukuphefumula.